Izingubo ezifashisayo zonyaka wonke-2016. Imfashini ye-2016 egcwele, ebusika, entwasahlobo, ehlobo, ekwindla
Isikhathi esinezinyanga ezine ze-2016 sezintombikazi ezigcwele
Njalo isikhathi, izindlu eziningi zemifashini zimelela amaqoqo amasha nezisha. Kumele kuqashelwe ukuthi ekuqoqeni amaqoqo, abadwebi befashini abakucabangeli nje kuphela izibalo zabesifazane abade nabancanyana, kodwa futhi nezibalo zabesifazane abanamafomu amahle.
Ebusika: inkathi yemfashini ka-2016
Ukuze kusetshenziswe izingubo zokugqoka zasebusika izishisi nezindwangu ze-invoyisi encane, zakha ivolumu engadingekile. Ngakho-ke, abesifazane abagcwele, ukukhetha izingubo ezifudumele kufanele baqaphele. Uma sikhuluma ngezingubo zangaphandle, bese unikela okuthandayo emasimini alungile noma afanelekayo. Badinga futhi bangafakwa nge-thongs namabhande. Izitayela nezembatho zezingubo zigwema ukulayisha, futhi izinto kufanele zibe bushelelezi.
Imfashini yabesifazane abagcwele iphakamisa inqwaba yezinhlamvu zezilwane, izesekeli, imibala. Uma uzihlanganisa ngokufanele, bazokwenza isithombe somfazi ogcwele empilweni esempumalanga, ehlanziwe. Esigodlweni se-wardrobe sasebusika, kungcono ukuba nemikhono embalwa eboshiwe, izingubo ezifudumele, izikhwama eziningana. Ukuhlelwa kwesikhashana kuyoba yi-V cutouts enemihlobiso, imigqa yesikhathi eside, ama-lapel amade, amabhande akhanyayo. Konke lokhu kuyabonakala ngokunciphisa isibalo futhi kungakwazi ukufihla kahle amaphilisi engeziwe. Isitifiketi esinesiketi sepensela enejacket ehlanganisiwe sizobukeka sikhulu, futhi sengeze izesekeli ezithakazelisayo nezesimfashini ngesimo sokumiswa okwesikhashana, izicathulo ezisezingeni eliphansi kanye nesikhwama esincane.
Spring: inkathi yemfashini 2016
Uhlobo oluhlukahlukene kakhulu lwezinto zokugqoka zasempumalanga kanye nezingubo zokugqoka abesifazane abathandekayo. Izixazululo ze-Bold nemibala ekhanyayo ziletha nomoya we-spring futhi izojabulisa abafazi. Izindwangu ezikhanyayo namashukela afakiwe zidala isithombe esingakhohlwayo kanye nosizo ukuphuma esixukwini. Yenza isithombe sibe nenhle kakhulu futhi kube lula ukwenza izintambo ngezindwangu zesilika. Kungcono ukukhetha ngemifanekiso emibala noma i-monochrome. Ukuhlangana kwabo nama-T-shirts noma ama-tanki mahhala kuzoheha abantu abazungezile futhi bafihle ngobuhlakani ukushiyeka kwalowo mfanekiso.
Kwabesifazane abagcwele, abakhiqizi batusa i-jeans encishisiwe ngaphandle kwemininingwane engadingekile ngenhla yombala. Futhi ukuze ube mncane, uhambisane ne-longitudinal strips kanye nezibopho eziqondile, kuyoba yindlela enhle. Uma ukhetha iziketi, hlala ubude phakathi kwamadolo.
Summer Fashionable 2016
Ngenkathi ehlobo yabesifazane abagcwele, imfashini ka-2014 inikezwa ukugqoka izingubo nge-neckline ekwazi ukugcizelela ubuhle nobuhle bebele. Imidwebo eminingi, izigqoko nezindwangu zizokwenza isimo sengqondo, futhi isitayela nesiGreki esibucayi phansi kuzokwenza ukuthi lesi sibalo sibe mnandi. Ukuqedela phezulu kuphazamisa ukunakwa emathangeni aphelele.
Okuncane okungajwayelekile futhi okungeziwe kahle kuyoba ubucwebe ezenziwe ngokhuni, insimbi kanye nobuhlalu. Bazobeka isikhalazo bese beqedela isithombe ngemininingwane enenzuzo. Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa izikhwama zokukhanyisa nemikhonto, zizokwenza isimo semfihlakalo nemfihlakalo futhi sisindise ilangeni elishisayo.
Isimo sezulu sase-Autumn sichaza imithetho yaso lapho ukhetha izingubo. Izindwangu eziboshiwe ngefomu lezinhlanga ezizosetshenziselwa kuzosiza ukudala ukuzola nokuphakama. Imibala eqondile enezesekeli ezikhethiwe kahle izoba ekahle kwabesifazane namantombazane abanomfanekiso ogcwele. Ngaphezu kwalokho, ugqoke emakhakheni afudumele uyogcizelela ubushelelezi kanye nesifazane wesifazane.
Imininingwane ebalulekile yesigqoko sokugqoka ingavimba ama-sweaters nemigqoko ende, idinga ukugqoke ngama-panty classic kanye nama-jeans. Lolu khetho luzoba yizimo ezihlukahlukene. Esigqokeni sangaphandle akufanele sishisekele ngezesekeli. Kwanele ukufaka isiketi ngesigqoko ithoni noma ukuyibeka ngokuphrinta okukhazimulayo. Ukuze ukhethe umbala wezingubo zangaphandle, ungahlala emasinini, amnyama noma amnyama amathoni aluhlaza.
Abantu abagcwele bakhetha izingubo eziyinkimbinkimbi. Ekugcineni, ikhabethe labo limelela izinto eziningi ezifanayo nokungazicabangi. Noma yimuphi owesifazane ngendlela yakhe enhle, ungesabi ukuzama ukubukeka emuhle.
Club igqoka abesifazane
Isitayela sesitayela sesitayela
Ungakhetha kanjani ijaji lomama okhulelwe?
Ubuciko bokuthenga okulungile: yini nokuthi ungayithenga kanjani ku-Zara, Asos, H & M
Izingubo zangaphandle zangabesifazane esikhathini esibi sasebusika
Amacengezi ebusika asebesifazane kanye namajeti phansi
Ukwesaba kwezingane kanye nokulungiswa kwabo
Indlela yokukhetha i-oven eyakhelwe ngaphakathi
Amavithamini wokwenza ngcono imemori
Izingane ezingu-5 zezinkanyezi zaseRussia ezazingakwazi ukuphinda impumelelo yabazali, isithombe
Ukuphuza nokuphuza u-Anastasia Volochkova waphinde washaqa i-Internet
Izipho zangempela zomkakhe ngoMashi 8
Izindleko zokunakekela ukukhulelwa: izibuyekezo nemiyalelo yokusetshenziswa
Ingabe uhlale uqine nabesifazane abakhulelwe nezingane?
I-Risotto enezikhonkwane ne-gorgonzola
Yiziphi izinhlobo zamabele ezesifazane ezikhuluma ngobulili bakhe?
Izinkukhu zemilenze ku-yoghurt batter
Izingoma zasendulo nezesimanje ekuqedeni iziqu emakilasi angu-4, 9, 11 (imibhalo, amanothi)
Umlobi wezangomuso u-Anastasia Kostenko wahleka ukungafundi kahle
Indlela yokuhlanza indlu embi?
Ukuhlukumeza kwabazali kubantwana
Imithetho yokuhlonipha nokuziphatha kwezingane